Qabsoon keenya hin dhaabatuu biyya ala fi biyya keessati ittii fufu qaba !!!
Oromoon Bagga Gamadan !!!
No Menelik, No Tedy Afro, No Samayawi Party, No Ginbot7, No Neo-Menelik Parties in Oromiyaa!!!
Nafxanyoon Neo-Menelik Oromiyaa keessa ba'uu qabuu!!
Injjifannoo Tedy afro fi Bedele birra irrti argane Qabxilee gara gadii kana irratti bareefaman hunda hanga Gonfanuti qabbsoon kara hunda ittifufu qaba. Waan Paltak Roomin Oromoo "Menelik Genocide against Oromo fi other Ethops" Hojeete Ormoon Million 50 hundi deggere itti fufu qaba. Dhaabbilee Oromoo garaa Hawwasa Oromootti gadii bu'aan falmachu qabuu, Hayuuleen Oromoo Haraba ykn waca Habasha sodachuun falmachuu irra of qusachuu hin qaban.
Habashoon bara Tewodros, Yohanis, Menelik, Haile Silasee, Dargi fi TPLF Yakka duguga sanyi Oromoo irra raawwatan Amalee raawachuuf Moresh Wagane (Gala Gaday) fi dhabilee Aada adda lola Oromoo irra labsan jiru. Bareefama Moresh (Gala Gaday) facasee fi Paltak Room Debtara, Abba Mela, Qale, Ethiopia karenti Affärs jeechdamu keessatti Oromoo deebisan garboonfachuu tarsimoo Isan qoophefacha Jiran Ergan xinixalee booda Oromoo lamii keenya marisisuf bareefama kana bareesuf dirqamee. Neo-Menelikoon yaakka abootiin Isan Oromoo irra raawwatanf dhifma jeechuu mannatti Moresh Wagene (Gala Gaday) yakkaa Oromoo irra raawwatamee Hunda haaluun dubii jijjirani akka Oromoon isaan jesseetti dhiyeesa jiru. Moresh (Gala Gaday) fi Leeliftoon Menelik hund Abootiin isaani waraa bara Menelik fi Haile Silasee Oromiyyatti raamadaman Oromoo ajjessa turan dha. Kanaaf dhimma kana haaluuf Olola adeemisisaa jiru. Oromoon baroota darbee keessa lalafuun isaa Neo-Menelikoon akka nu tufatan godhe jira. Dhabbilee Oromoo waan faca'aanf waan barbanee gochuu ni dandeenya jeecha jiru. Nu Oromoon diina keenya dura dhabachuuf tokkummaa qabna.
Habashoon kara media Isan hundan lola Oromoo irratti labsani jiru. Oromoon ammoo gochaa duguga sanyii jarii nuu irratti raawachuuf deeman of Irra dhorkuuf ofi qoophesuu Qabna. Oromoon Nannoo ormaa utuu hin deemin diina boobaa isaa keessa ta'ee Yakkaa isaa irratti dalguuf qoopha'aa jiru of Irra dhorkuuf qoophi inni gochuu qabu: -
1. Ijoolen Nafxanyoota siirna Menelik fi Haile Silase keessa Oromiyaa keessa qubatan lafa Oromoo fi Oromiya gadii dhisan ba'uu qabu,
2. Dhabbileen Nafxanyoota warii isaani Oromoo fixaa turan kammi iyuu lafa Oromoo keessa akka hin sochoonee Oromiyan seeran dhorkuu Qaba,
3. Ortodoksin lafa Oromoo harka sadi keessaa harka tokko siirna durii keessatti dhunfatee qabachuun akka barbaadeetti bakka barbaadeetti walda ijaratee Oromoo basasa ture fi jiru atataman ijoolee Oromootti walda dabarsuun ijoolen Oromoo uummata Isaan Afaan Oromoon akka tajajilan gochuu,
4. Siirn durii keessa ta'ee amma haayyama Oromoo Malee Oromiyya keessa warii qubatan hundi halaa duree tokko malee ba'uu qabu, kana jeechun ummataa walloo rakko Beelaa fi Onngen Walloo Irra dhufee Oromiya keessa qubatee hin ilalalutuu,
5. Siidaan (Hawuultiin) Menelik Handhura Oromiya Finfinnee Irra atataman ka'uu Qaba,
6. Yakkaa siirna Nafxanyan Oromoo fi ummatoota Kibba irra dalgamee Koreen qooratee seena dhugaa bareese yakkaamtoon akka adabaman godhu dhabbachuu qaba.
7. Afaan Oromoo Atataman Afaan Hojii biyooleessa Ethiopia ta’uu qaba,
8. Finfinneen Mootummaa Nannoo Oromiyaa jalatti buluu qabdi.
9. Hidhamtoon siyyaasaa Oromoo Haalaa duree tokko Malee gadi dhifamuu qabu,
10. Nafxanyoon Oromiyaa Seenan Hundi maliif akka Oromiya dhufan qooratamu qabu,
Lola Isaan nuu irratti banan lamsheesuuf Oromoon tarkanf inni fudhachuu qabu,
Oromoon Nafxanya Oromiyaa keessa jiru Hunda irratti ugura ka'uun lola tokko malee Oromiya Keessa ari'achuu ni danda'ama. Oromoon wali- gurmeese, wali galee ugura akkasi ka'uu Qaba:- Habasha Amanuu fi waliin hojjechuu dhisuu, Diina Irra bituu fi Itti gurgguruu dhisuu, Hoteela diina lixee nyachuu dhisuu, Nafxaanyatti firomuu dhisuu, Diinatti heerumuu fi diina fuudhuu dhisuu, Diinatti kara argisisu dhisuu, Diinatti lammi kee saxiluu dhisuu, Afaan diinan dubachuu dhisuu, Diina waliin ijaramuu dhisuu, Diina waliin sagaduu yookiin waqeefachuu dhisuu, Qoofati hambisuun akka namni isaan hin awalee gochuu.
Mali Gonuu? Habasha (Abyssinaoota) Amansisu yaalun dhagaa Guracha irra finca'uu dha. Kanaafu jara dhifnee hojii keenya hojeechuu. Oromummaa deebisan ijaruu, Tokkumaa ijoole Oromoo irra egalan media channels lafa irratti gadii Busuu, Tokkumma Gurmuu Haawwasa Oromoo deebisan ijaruu, Tokko Dhabbilee Oromoo atataman hala durée tokko male tokko gochuu, Qabsoo Oromoo kara kara baleesi booleesi biyya galchuu; MACAA fi fi Tullama Waqeefnaa deebisan ijaruu , Seena soba Habashan Oromoo irra barreessa turan jijiramuu Qaba; Uumataa Kushatic Hunda amatamuu qabuu.
Gummi Paarlamaa Oromoo 2/01/2014